အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
(၁၀-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ ဗန်ကောက်မြို့)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၅၂) နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားနှင့် အာဆီယံအလံ လွှင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံအလံ လွှင့်တင်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတွင် H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများသည် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့်အတူ အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသည့် အာဆီယံဆိုင်ရာပြခန်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအစီအစဉ်များ၊ ကစားပွဲများနှင့် အာဆီယံသံရုံးများမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပြခန်းများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားလူငယ်များ အာဆီယံနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာတိုးစေရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပသည့် အာဆီယံဆိုင်ရာ ပြခန်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအစီအစဉ်များ၊ ကစားပွဲများသို့ ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ကျောင်းသား/သူများ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။